दिनमा कति पटक सेल्फी लिनु हुन्छ ? धेरै सेल्फी लिनु पनि मानसिक रोग ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
दिनमा कति पटक सेल्फी लिनु हुन्छ ? धेरै सेल्फी लिनु पनि मानसिक रोग !
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०७६, शनिबार
एजेन्सी । तपाईले दिनमा कति पटक सेल्फी लिनु हुन्छ ? यदि तपाई अत्याधिक सेल्फी लिनुहुन्छ भने विचार गर्नुहोस् त्यो मानसिक रोग पनि हुुन सक्छ ।पछिल्लो समय सेल्फी लिने प्रचलन निकै बढ्दो छ । विभिन्न पार्क तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा मात्रै नभई सडकमा पनि मानिसहरु सेल्फी लिइरहेको देखिन्छ । सेल्फी लिएर सामाजिक सन्जालमा राख्ने प्रचलन नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर जहाँ पनि छ । मानिसहरु रहेक काम गर्दा पहिला सेल्फी लिन्छन् अनि मात्रै काम शुरु गर्ने गर्छन् ।
तर मनोवैज्ञानिकहरुले भने एकैदिनमा पटकपटक सेल्फी लिनु मानसिक समस्या हुन सक्ने बताएका छन् । सो समस्यालाई मनोविज्ञानको भाषमा ‘सेल्फी दुव्र्यसन’ भनिएको छ । यद्यपि अमेरिकन साइक्रियाट्रिक एशोसियसनले भने यसलाई मानसिक समस्याको सूचीमा राखेको छैन । मनोवैज्ञानिकहरुले भनेका छन्, ‘विश्वमा बढ्दो सेल्फी दुव्र्यसनले मानसिक समस्या सेल्फिटिज निम्त्याउने खतरा छ ।’ भारतमा युवाबीच गरिएको यो अध्ययनबारे इन्टरनेशल जर्नल अफ मेन्टल हेल्थ एण्ड एडिक्सनमा प्रकाशित छ । मानिसले पटकपटक सेल्फी लिने र फेसबुक, स्न्यापच्याट, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सन्जालमा अपलोड गर्नुलाई नै सेल्फी दुव्र्यसनका रुपमा लिन सकिने क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीका मानसिक रोगका प्रोफेसर डा. रमणी दुर्बासुला बताउछिन् । ‘तपाईंको फोटो ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेल्फी छ र अझ त्यसमा फिल्टर प्रयोग गर्ने गरिएको छ भने त्यो खतराको लक्षण हो’, रमणीले भनिन ।
भारतीय राजदूत रणजित राय म्याग्दीको घारस्थित पर्यटकीयस्थल पुनहिलमा शनिबार दृश्यावलोकन गर्दै […]
प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै फेसबुक आइडी नक्कली!
काठमाडौं, मंगलबार दिउँसो २ बजेतिर ‘पीएम केपी ओली’ ले फेसबुकमा स्टाटस लेखे, एक दुई दिनभित्र नाकाबन्दी हट्छ, […]
प्राधिकरणले बल्ल तोक्यो सिन्धुपाल्चोकमा कार्यालय प्रमुख
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सबै भन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति […]
भूकम्प पिडितलाई नीजि आवास पुनर्निर्माणको किस्ता लिन नयाँ समयसीमा (सूचना)
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पिडितहरुले नीजि आवास पुनर्निर्माण गर्न अनुदान रकम लिन […]
काठमाडौं । निजी विद्यालयको व्यापारीकरण रोक्न सरकारले नीतिगत प्रयास गरेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ […]